‘सञ्जु’ हिट भइसकेपछि पत्ता लाग्यो राजकुमार हिरानीको यस्तो झुट ! - Koshi Online
‘सञ्जु’ हिट भइसकेपछि पत्ता लाग्यो राजकुमार हिरानीको यस्तो झुट !
विराटनगर, भदौ २९, राजकुमार हिरानी निर्देशित ‘सञ्जु’ले बक्स अफिसमा करीब ५ सय ८० करोडको व्यापार गर्यो । फिल्मको कलेक्शन जस्तै भएपनि कहानीलाई लिएर राजकुमार हिरानीको आलोचना पनि भयो ।
हिरानीलाई सञ्जय दत्तको ‘इमेज मेकओभर’ गरेको आरोपसमेत लाग्यो । यस फिल्मको प्रमोशनका बेला हिरानीलाई यसबारे सवाल पनि आएका थिए तर, जवाफमा उनले साँचो कुरा मात्र देखाए ।
तर, पछिल्लो समय भारतीय सञ्चारमाध्यममा ‘सञ्जु’लाई लिएर अनौठौ कुरा खुलाशा भएको छ । निर्देशक हिरानीले आफूले यसको स्क्रिप्ट बदलेको कुरा खुलासा गरेका हुन् । उनले भने, ‘सञ्जु’ को छायांकन सकिएपछि कुनै सीनको मैले दोहोर्याएर शूटिङ गरेको थिएँ । छायांकनका बेला मलाई यस्तो लाग्यो कि म गलत दिशामा जाँदैछु । फिल्म सम्पादनको क्रममा मैले केही व्यक्तिलाई देखाएँ, तर, उनीहरुले रुचाएनन् र मैलें स्क्रिप्ट फेरिदिएँ ।’
हिरानीले अगाडि थपे, ‘सुरुवातमा मैले एउटा वास्तविक कथा पेश गर्न चाहन्थें । म कुनैपनि हालतमा सहानुभूति देखाउन चाहन्न थिएँ । तर, पछि मैले आफ्नो फिल्मको हिरोलाई सहानुभूति देखाउनै पर्छ । ’
‘त्यसपछि मैले फिल्मको शुटिङ दोहोर्याएर गरें । यसको स्क्रिप्ट पनि बदल्दिएँ । सहानुभूति भएको सीन चै दोहोर्याएरै खिचेँको हुँ । फिल्मको एक सीनमा कोर्टको फैसला आएपछि सञ्जयले आफूलाई मार्ने कोशी िगर्छन् । त्यो सीन पहिले खिचेको थिइँन र पछि दर्शकलाई सहानुभूति दिलाउन खिचेँ ।’
हिरानीले भने, ‘मेरो विचारमा सञ्जय दत्तले धेरै अस्वभाविक काम गरेका छन् तर उनी गलत मानिस होइनन् । उनले जिन्दगीमा धेरै गल्ती गरेका छन्, धेरैलाई दुःख पुर्याएका छन् । तर, पनि उनी गलत होइनन् ।’